Iyo stratospheric mitengo yekuve neApple Chitoro muUnited Square muSan Francisco | Ndinobva mac
Iyo stratospheric mitengo yekuve neApple Chitoro muUnited Square muSan Francisco
Masitepisi egirazi mune yavo ichangoburwa Apple Store mu San Francisco Union Square, zvine mutengo $ 33,333 kukwira masitepisi egirazi, nepo chivakwa chacho chichidhura $ 19 mamiriyoni, maererano nemvumo yekuvaka yepamutemo yakawanikwa ne'Patently Apple '.
Iyo yekuvaka moto sisitimu inosasa yaive nemutengo unofungidzirwa we $ 2.28 mamiriyoni, Kuisirwa simba rezuva padenga remutengo $ 800.000apo kuiswa kwemamwe mapaneru $ 150,000.
Pano madhoo eApple Chitoro ari kuvhura pic.twitter.com/cOIoM1EChb
- Matthew Panzarino (@panzer) May 19 we2016
Heano kuzara kuzere kweimwe mari:
$ Miriyoni 2.28: Mutengo wese wekusimudzira yechivakwa chinosasa hurongwa.
$ 800,000: Solar mudziyo wemagetsi ukoshi hwe50 kilowatts padenga.
$ 250,000: Mutengo wemukati nekunze kwechivakwa chivakwa.
$ 150.000: Mutengo wekuisa mapaneru ezuva.
$ 100,000: Mutengo wekuparadzwa kwechitoro chekare.
$ 100,000: Kukwidziridzwa kwekudengenyeka kwepasi pechipiri uye padenga.
$ 82.000: Mutengo wekuisa masaini kunze kwechivako.
$ 50.000: Mutengo wemashefu ezvitoro.
$ 4.000: Mutengo wemaaramu emoto.
Mvumo yekuvaka haina kujeka nezvekuti yakawanda sei magedhi makuru anodhura. Masuwo mahombe, ari pamativi ese echitoro, akareba makumi mana nemamita makumi mana paupamhi kana akavhurwa (kubva pamamita gumi kusvika gumi nemaviri).
Mari inoshandiswa isabysmal uye zvazvinodhura kugadzira Apple Store, mubvunzo wangu ndewekuti mushure mezvese izvi vanoita purofiti. Kana ingori nzira ye kuparidzirwa kuva neApple Chitoro munzvimbo ine chiratidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo stratospheric mitengo yekuve neApple Chitoro muUnited Square muSan Francisco
Imwe yakasarudzika webhusaiti yechipiri-ruoko Mac mitengo
Yakaderera stock yeThunderbolt Ratidza muApple Chitoro